musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Yakavanzika gem yekufamba muIndia: Quaint Jaisalmer
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Chikomo Mahotera eRajasthan Jaisalmer
Jaisalmer iguta rakamisikidzwa renharaunda muganhu muRudzi rweRajasthan muIndia.
Jaisalmer ine akatiwandei zvinokwezva, sezvazvaive pachena panguva yechiitiko muna Chikumi 29, 2021.
Chiitiko ichi chakarongedzwa nePHD Chamber of Commerce, uko vatauri - vese vakuru nevamwe - vakataura vachipenya nezveguta rakasimba, pamuganhu nePakistan.
Vatauri vakati guta rine zvakawanda zvekupa kuvashanyi, vese vekumba nekune dzimwe nyika zvakafanana.
Izvo zvakaoneswa zvakare kuti kune mamwe matambudziko nematambudziko akatarisana nedhorobha renhoroondo izvo zviri kutadzisa kukura kwekushanya. Asi kutanga, iyo yekuwedzera mapoinzi.
Kuva guta remuganhu, Jaisalmer inopa mukana wekutarisa kune rimwe divi rekugara muIndia. Border Security Force nekuvapo kwayo inopa zvakawanda kuti vashanyi vafarire.
Nzvimbo yacho inogara kune chimwe chikafu chikuru, icho choga chinokwevera vashanyi vazhinji. Chechipiri, kune tembere dzakakurumbira, asi vashoma chete ndivo vari kuziviswa. Vanhu vanoziva chete chikamu chegwenga renharaunda asi kwete kunyanyisa madziva. Iyo Indira Gandhi Canal pachayo inopa chaiyo mabiko emaziso.
Shiri dzinofamba-famba ndeimwe dhirowa huru sezvakaita hunyanzvi hunopfuura makumi maviri nemabasa emaoko ayo akapa mabasa kuvashandi vemo.
Asi, ikozvino, rimwe divi reruzhowa, sezvazvaive.
Kubatana inyaya hombe munzvimbo iyi, nendege dzisingapi chikafu nguva zhinji kuguta uko kwakawanda mahotera akanaka akauya. Maketani akati wandei akauya nemahotera muguta, sezvakaitawo vanhu vemuno, kusanganisira Bhim Singh, anova mutambi anonyanya kupa vatashanyi vanobva kure nepedyo.
Chechipiri, pane poindi imwe chete kubva apo munhu anogona kuona muganho, nepo paine mukana panogona kunge paine 4. Zvirambidzo zvakati wandei pakufamba munzvimbo dzinoshandawo sekugumbura vashanyi.
Iyo Archaeological Ongororo ye India (ASI) ibazi rehurumende yeIndia rakanamatira kubazi rezvetsika rinoona nezve ruzivo rwekuchera matongo nekuchengetedza pamwe nekuchengetedza zviyeuchidzo zvetsika munyika. ASI yakapihwa mhosva yekuchengetedza guta mhenyu reJaisalmer, asi kusvika parizvino rave kutadzisa budiriro nekusabvumidza chero shanduko mudzimba, idzo dzinoda kugadziriswa nekukurumidza.
UNESCO yakaratidzawo kufarira kutamba chikamu mukuchengetedza zvakasarudzika zveJaisalmer. Semuenzaniso, Kunyange hazvo yakapihwa mvumo kuWorld Heritage Committee muna2018, chirongwa cheManagement cheJaisalmer Fort hachisati chapihwa kuti chiongororwe ichisiya kutsunga kweUNESCO kuchakamirira.